Gufgaf|Online आमा नबन्ने मुडमा माधुरी र जुही !
आमा नबन्ने मुडमा माधुरी र जुही !
बलिवुडमा ८० र ९० को दशक र त्यस भन्दा अगाडि ५० कटिसकेका अभिनेत्रीहरुलाई निर्माताले सिनेमामा आमाको भूमिकाको प्रस्ताव राख्थे । अभिनेत्रीहरुले पनि सहजै यस्ता भूमिकाहरु निर्वाह गर्थे । तर अहिले यसको ठिक उल्टो छ । अभिनेत्रीहरु ५० कटिसक्दा पनि आफूहरुलाई जवान राख्न निकै मेहनत गर्छन् । यस्तै उनीहरु सिनेमामा पनि आफूलाई ग्लयामरस रुपमा प्रस्तुत गर्न खोज्छन् । अभिनेत्री माधुरी दिक्षित, निना गुप्ता, जुही चावला यसका उदाहण हुन् ।
उनीहरु सिनेमामा आमा, फुपु वा ठूली आमाको भूमिका निर्वाह गर्न मान्दैनन् । अभिनेत्री जुही चावलालाई अगामी एक सिनेमामा अभिनेत्री तापसी पन्नुकी आमाको भूमिकाका लागि अफर गरिएको थियो । तर उनले यो भूमिका गर्न मानिनन् ।
उनले छोडेको त्यो भूमिका अमृता सिंहले गरेकी छिन् जुन भूमिका हेर्न जुही निकै उत्साहित पनि छिन् । जुहीले यो सिनेमामा भूमिका मन नपरेर भन्दा पनि आमा बन्नको लागि खर्चिनु पर्ने समय सम्झेर काम नगरेको भारतीय सञ्चार माध्ययमलाई बताएकी छिन् ।
पछिल्लो समय उनलाई यस्ता भूमिकाहरुका लागि दिनहुँ प्रस्ताव आईरहेको छ । तर उनले गरेकी छैनन् । उता अभिनेत्री निना गुप्ताले पनि गत वर्षको हिट सिनेमा बधाई हो मा अभिनेता आयुष्मान खुरानाको आमा बनेर काम गरिन् । उनलाई यो सिनेमा पछि अन्य केही सिनेमाका लागि आमाको भूमिकाका लागि अफर आईरहेका छन् । तर उनले ती भूमिका गर्न चाहेकी छैनन् ।
आगामी सिनेमा टोटल धमालमा अभिनेत्री माधुरी दिक्षित ग्लयामरस भूमिकामा देखा पर्दैछिन् । त्यस्तै अर्को सिनेमा कलंकमा पनि उनी आमाको भूमिकामा छैनन् ।
उनको निकट स्रोतका अनुसार उनी आगामी ६ वर्ष सम्म यस्ता बुढा रोलहरु नगर्ने मुडमा छिन् ।